MAANHADAL: Qadar iyo ku luglahaanshaheeda qaraxyada Bossaso (dhegayso) – Radio Daljir
MAANHADAL: Qadar iyo ku luglahaanshaheeda qaraxyada Bossaso (dhegayso)
Luulyo 26, 2019 7:33 g 0
Mowduuca maanta ee MAANHADAL waa: Dowladda Qadar iyo saamaynteeda amnidarada Soomaaliya sidee u aragtaa?
Waxaa qadka taleefanka ku jira aqoonyahano iyo siyaasiyiin ku kala sugan Soomaaliya, UK iyo Imaaraatka Carabta. Toos dhammaan xarumaha Radio Daljir ee magaalooyinka Bossaso, Qardho, Garoowe, Gaalkacyo, Buuhoodle, Caabduwaaq iyo degmada Burtinle, waxaadna naga maqashaan dhammaan deegaamada Puntland, Kilinka Soomaalida ee Itoobiya, deegaamada Galmudug, Bariga Somaliland iyo gacanka Cadmeed.
Dawladda Qatar waxaa lagu eedeeyey qarax ka dhacay magaalada Bossaso taas oo la xiriirta dhismaha dekadda iyo shirkadda DPW. Madaxweynaha Puntland ayaana arrintaas ku tilmaamay mid aan la beensan karin wuxuuna dalbaday baaritaan degdeg ah, Qadar wey beenisay, DFS jawaab khafiif ah oo dad badani mas’uuliyad darro ku tilmaameen ayey ka bixisay arrintan.
Haddaba hoos kaga bogo MAANHADAL iyo maanta.
Madaxweyne deni oo casho sharaf u sameyeey martida kasoo qayb gashay Bandhigga Buugaagta Garoowe
Daljir & BBCMA: Baraarugga Haweenka – Taxanaha 18aad (Xaawo Axmed iyo Maxamed Xasan Dhalo – dhegayso|daawo)